Error ! Message - MYSTERY ZILLION
Error ! Message
February 2010 edited March 2010 in Windows XP
ကျနော်စက် စဖွင့်ဖွင့် ရင် အဲလို အမြဲတက်လာတက်ပါတယ်။ အဲဒါလေး ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။:)
ဟော... ဘယ်သူမှ လဲ ဖြေကြဘူး..... ကူညီကြပါအုံး... အကိုကြီးတို့ ... အမ ကြီးတို့။
မိုးနတ်သားလေး ရေ.. ဒီလင့် လေး ကို သွားပြီးတော့ Windows Worms Doors Cleaner လေး ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး run လိုက်နော်. ပြီးတော့ အဲဒီထဲက တတိယမြောက်ကလေးကိုတော့ ဒီထဲကလို အစိမ်းရောင် ဖြစ်အောင် မရမ်းခဲ့လိုက်နဲ့နော်. ဒီအတိုင်းထားခဲ့လိုက်ပါ။ အပေါ်က နှစ်ခုပဲ ရမ်းခဲ့လိုက်ရင် ရပါပြီ ။ အဲဒီ တတိယလေး ကို ရမ်းခဲ့ရင်တော့ အင်တာနက်တော့ ရပြီး LAN shared မရဘူး ဖြစ်သွားမှာမို့ပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် အသံလည်း မရဘူးဖြစ်သွားတက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီအတွက် အဲဒီဆော့၀ဲလေး က အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း ဒီထဲမှာ ပြောထားတာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သိပ် မအား လို့ ဒီထဲကို မ၀င်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီ ဒီနေ့ စ၀င်ချင်း ဖြေလိုက်တာပါခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာ ကို ပြောပြတာပါ.တကယ်လို့... အဆင်မပြေခဲ့ရင် လည်း ခွင့်လွှတ်နော်..
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် ဆော့(ဖ)၀ဲ ပက်ကေ့လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။အဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ၀င်းဒိုး အတ်ဒိတ် ၃ ခုကိုအရင် Run ပါ ။ ပြီး ရင် WinsockFix ကို run ပါ ။အဲကောင်မ run ခင် IP ကိုမှတ်ထားပါ တစ်ခြားSetting တွေရောပေါ့ ။ အဲကောင် Run ပြီး restart ကျသွားပါလိမ့် မယ် ။ ပြန်တတ်လာရင် အိုင်ပီပြန်ထည့်ပြီး ။ WWDC ကို run ပြီး Restart ကျသွားပြီးတာနဲ့ အဲ win32 generic host လုံး၀ရှင်းသွားပါပြီ ခင်ဗျာ ။ Software Package လေးကို ဒီက နေယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။
အဆင်ပြေပါစေ ငလင်း ။
လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးမည်...နှစ်ယောက်စလုံးကို ကျေးဇူးပါ.....မရရင် အကြောင်းကြားပါမည်။